Duubyada gobolka Baay oo shaaciyay inay gudoomiyihii hore ee Baay ay ku qanciyeen xil ka qaadista lagu sameeyay. – Radio Daljir
Febraayo 13, 2013 8:14 b 0
Baydhabo, Feb 13- Duubyada gobolka Baay ayaa shaaciyay in gudoomiyihii hore ee gobolkaasi ay ku qanciyeen inuu aqbalo digreetadii dhawaan xilka lagaga qaaday.
Maalmihii ugu danbeeyay waxaa jiray murano iyo is jiid-jiid ku aadan xil ka qaadistii lagu sameeyay gudoomiyihii hore ee Baayo C/fitaax Ibraahim Geeseey, taasoo ay ku kala qaybsameen dadka deegaanka.
Malaaq Cali c/raxmaan oo ka mida madaxda dhaqan ee gobolka Baay ayaa maanta waraysi uu siiyay radio daljir waxaa uu ku sheegay inay gudoomiyihii gobolka C/fitaax Geesey hada uu diyaar u yahay inuu si qanacsanaan uu xilka ugu wareejiyo masuulka cusub ee la soo magacaabay, isagoo intaa ku daray inay arintaas si weyn oga shaqeeyeen madax dhaqameedka deegaanka.
Maalmaha inagu soo aadan ayaa la qorshaynayaa in la qabto xalfad xilka uu kula wareegayo gudoomiyaha cusub ee gobolka Baay.
Gudoomiyihii hore ee gobolkaasi ayaa taageero buuxda ka haysta shacabka deegaanka, balse waxaa xilka ka xayuubisay DF ee Soomaaliya.